Daawo Muqaal Xiiso Leh oo Laga Diyaariyey Meelaha aanay Waxbarashadu gaadhin ee Somaliland – WARSOOR
Daawo Muqaal Xiiso Leh oo Laga Diyaariyey Meelaha aanay Waxbarashadu gaadhin ee Somaliland
Burco – (warsoor) – Hadii La filaayo ku dhawaad 25kii sano ee Somaliland ay ku naaloonaysay nabad, badhaadhe, iyo sare u kaca tacliinta.
Wali waxaa jira hadana meelo tiro badan oo ay ka jiraan baahi wayn oo loo qabo dhinaca tacliinta, iyo baahiyaadka nolosha ee inagu gadaaman.
Xafiifa xasan nuur iyo xubno kale oo iskood isku soo abaabulay ayaa xadhiga u xidhay sidii ay usoo gudbin lahayeen, degaanada ay ku dulmanyihiin dhalinyarta iyagu ilaa hada la’. Adeegyadii waxbarasho ee ay xaqa ugu lahayen dawladooda, hase ahaate ay gabtay ama se ay ku fashilantay ogaanshaha dhalinyaradaasi iyagoo la garab istaagay kaalmayn iyo istusida bulshadooda somaliyeed ee wax kala qaban kara baahiyaha dhinaca waxbarashada ee ay tabayaan, iyadoo degaanada ay ku noolyihiina aanay lahayn haba yarate goobo u gaar ah waxbarashada, marka laga reebo madarasado malcameed oo ay u sameyeen xubnahani iskood isku diray.
Degaanada ugu daran ee ay tageen waxaa kamid ahaa, Laangalooley,jameecaadka iyo sidoo kale bali sugule, oo dhamaantoodba ahaa degaano dhawaan la sameyey oo ay ku suganyihiin dad baro kacayaal ah iyo dad xoolo dhaqato ahiba.
Halkani waa malcamad qur;aan ku taala degaanka laangaloolay ee hoos timada degmada duruqsi ee gobolka togdheer, sida idiin muuqata ardaydu waa kuwo wax lagu baro goobtan idiin muuqata. Waxaa warbixin inaga siinaya macalinka dugsi quraankani
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE oo magacaabay Guddida Ololaha ee Gabiley